lithium rechargeable batteries Huawei P20 China Manufacturer
Description:Huawei P20 Battery Repair,Li-ion Huawei Battery Eropeana,Cheap Price Huawei Battery eo akaikiko
Home > Products > Bateria Huawei > Huawei P20 Battery > lithium rechargeable batteries Huawei P20
lithium rechargeable batteries Huawei P20
taratasy fanamarinana: CE/RoHS
Noho ny fahaiza-manaon'ny fiaramanidina finday 3400mah , ny Huawei P20 Battery dia mitondra tombony valo: 1) Ny angovo angovo sy ny fanoherana anatiny anatiny 2)
3) Faharetan'ny 45 degre ho an'ny mari-pana 5) mihoatra ny in-500 heny 6) 72 heny fitsapana tranainy 7) Tsy misy fahatsiarovan-tena 8) Amin'ny rafi-fiarovana fiarovana
Amin'ny maha-matihanina fanamboarana ny 7 taona traikefa, isika Hequanqingnuo ny teknolojia manana ny marika ny HQQNUO anjara amin'ny hafa Cell Phone Battery toy ny iPhone Battery, Huawei Battery, Samsung bateria sy ny Cell Phone Accessories toy ny iPhone dovia tranga, Qi fiara dovia, Wireless finday charger and etc.
Ny Batterie an'ny finday tsirairay dia mandalo ny fitsapana rehetra avy amin'ny fitaovana ho an'ny famokarana, avy amin'ny fitsilam-pandam-pahafatesana avo lenta, ny fitsapana fiarovana ny plastika fiarovana amin'ny fanamafisana ny vokatra , ny fitsapana amin'izao fotoana ary ny fitsikilovana. Ny batterin'ny finday dia manendry teknolojia feno automatique, ny famokarana isan'andro ny batteries dia mahatratra 12,000, ny batterie tsirairay dia efa nandalo fitsapana hentitra, ny latsaky ny halatra dia latsaky ny 3%.
Fitaovana ho an'ny Battery Huawei P20
Ny totalim-panafahana dia 4000mAh, izay mitovy amin'ny original.100% mifanentana amin'ny findainao, azonao antoka fa tsara ny miasa.
4. Ny chip vaovao manan-tsaina
Ny fanitsiana enti-mody dia tsy manimba ny fiara sy ny finday.
5. Hihoatra ny fahaiza-manao, ny taham-pahaizana PCB dia mety hahatratra hatramin'ny 95%
Isika dia tafiditra ao amin'ny andiam-pandaminana tsy miankina amin'ny finday toy ny batterie iphone, ny batterie Huawei ary ny Samsung batterie, ny trondro iphone, ary ny fitaovana finday finday toy ny cellphone holders sy ny vokatra hafa.Hequanqingnuo dia manana rafitra fitantanana tsara sy siantifika ary mifantoka amin'ny fahamendrehana, dia mitazona amin'ny fifanarahana, miantoka ny kalitaon'ny vokatra, ary manaiky ny tetik'asa ara-barotra momba ny karazam-pitantanana amin'ny varimbazaha sy ny tombom-barotra madinidinika amin'ny vokatra avo.Products dia nandalo RoHS / CE / FCC Certificate, teknolojia tsy misy fepetra, recyclable.We mitana amin'ny fitsipika ' Quality Voalohany, fitoviana ary tombontsoa iraisana, fampivoarana iombonana, ary fanompoana ny tsara '.
1. Firy orinasa orinasa ve ianao?
Toeram-pambolena antsika no mipetraka ao Shenzhen, any Chine. Tongasoa eto amin'ny fitsidihanao anay.
2. Afaka mametraka lamandy ve aho amin'ny ambaratonga kely?
Eny, ankasitrahana ny baikon'ny fitsarana, ny MOQ ary ny fomba amam-panao manokana dia ekena.
3.Ho momba ny fe-potoana fandoavam-bola?
Amin'ny ankapobeny dia tahiry 30% mialoha, 70% mandanjalanja amin'ny T / T alohan'ny fanomezana.
4. Ahoana no itondranao ny entana ary haharitra hafiriana izany?
Matetika isika dia mivezivezy amin'ny DHL, UPS, FedEx na TNT, amin'ny ranomasina, amin'ny rivotra. Matetika dia mitaky 3-10 andro vao tonga.
5. Ahoana no hanomezana antoka ny fandefasana tsindrimandry ho an'ny filaminana?
Manao laharam-pahamehana ny fanondranana ny baikonao sy ny fanavaozana ny fandrosoana amin'ny famokarana hatramin'ny famoahana.
Raha an-taonany dia nanome antoka tsy misy fepetra 7 andro an-davan'andro isika amin'ny antoka rehetra.
6. Ary ahoana ny momba ny tolotrasa fanolorana anao?
Raha misy olana momba ny kalitaona, mifandraisa aminay avy hatrany. Ho solafaka isika ireo vokatra tsy mety.
7. Afaka manaiky ny baiko OEM miaraka amin'ny fonosana nangatahinao ve ianao?
Y es , nanaiky ny OEM baiko izahay, manonta ny fonosana LOGO sy ny entana ho fangatahana.
Product Categories : Bateria Huawei > Huawei P20 Battery
Battery nozzle original 3.8V huawei P20 Contact Now
100% orinasa mpamokatra batterie voalohany ho an'ny huawei P20 Contact Now
lithium rechargeable batteries Huawei P20 Contact Now
Huawei P20 Battery Repair Li-ion Huawei Battery Eropeana Cheap Price Huawei Battery eo akaikiko Huawei P10 Plus Battery Repair Huawei Mate 10 Battery Repair Huawei Nova 4 Battery Repair Huawei Battery Cell Repair Huawei P10 Battery Drain